प्रिमियर लिगको उपाधिः लिभरपुल कि म्यानचेस्टर सिटी
25 Jan 2020 | शनिबार, ११ माघ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
आइतबार, २९ बैशाख, २०७६
एजेन्सी । यस सिजन प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र म्यानचेस्टर सिटीको प्रतिस्पर्धाको अन्तिम खेल केही घण्टापछि सुरु हुनेछ । एक अंकको दुरीले म्यानचेस्टर सिटीले अग्रता बनाएको छ भने लिभरपुल आफ्नो भाग्यको भरमा मैदानमा उत्रिने तरखरमा रहेको छ ।
यो ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धामा लिभरपुलले बाजी मार्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो र उत्तिकै कमजोर रहेको छ ।
आज हुने अन्तिम खेलले कसले उपाधि जित्छ त्यो हेर्न विश्व आतुर रहेको छ । हालसम्कै सबैभन्दा रोमाञ्चक र ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा मानिएको यी दुई टोलीले नयाँ रेकर्ड राख्न समेत सफल भए । दुई प्रतिस्पर्धी टोलीको ९० अंक कटेको यो पहिलो पटक हो । शिर्षस्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीको ९५ अंक रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको ९४ अंक रहेको छ ।
आज हुने खेलमा लिभरपुलले उल्भरह्याम्टनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने म्यानचेस्टर सिटीले ब्राइटन होभ एण्ड एल्भियनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
चमत्कारको अपेक्षा गरेको लिभरपुललाई भाग्यकले कत्तिको साथ दिने हो त्यो भने यी क्लबहरुको खेल कुर्नु नै पर्नेहुन्छ ।
सन् २०१४ मा भएको प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र म्यानसिटीकै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसमा म्यानसिटीले बाजी मारहेको थियो । तर, यसपटक भने केही चमत्कार हुने फ्यानहरुको प्रार्थना रहेको छ ।
२९ वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने सपना देखेको लिभरपुलले कडा टक्कर दिदैँ हालसम्म ९४ अंक जोडेको छ । उसले यस सिजन एक खेलमात्र पराजित भएका छ ।
म्यानसिटीसँग पराजित भएको लिभरपुलले यस सिजन ७ वटा खेल बराबरी खेलेको थियो । हालसम्म प्रिमियर लिग (प्रिमियर लिग उपाधि धोषित) उपाधि नजितेको लिभरपुलले यस सिजन ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको छ ।
भाग्य चम्किए लिभरपुलले प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको समिक्षकहरु बताउँछन् ।
शर्मा राससको बेलायत प्रतिनिधि नियुक्त
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो समाचार एजेन्सीका रुपमा सञ्चालित राससले विदेशस्थित प्रतिनिधिका रुपमा बेलायतमा शर्मालाई नियुक्त गरेको उनले बताए ।
राति निद्रा लाग्दैन ! यी पाँच चिज राखेर सुत्ने कि !
दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ भन्ने शात्रमा उल्लेख छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन। तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ। शास्त्रले यस्ता कुराहरु
'हामीबीच प्रेम नै नभएपछि डिभोर्सको निर्णय लिएका थियौँ'
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् आमिर खान । उनले जेठी श्रीमती रिना दत्तसँग १६ वर्ष बिताउँदै अन्ततः डिभोर्स गरेका थिए ।
दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ भन्ने शात्रमा उल्लेख छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन। तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ। शास्त्रले यस्ता कुराहरुलाई सिरानीमुनी राख्नु राम्रो हुने भनेर उल्लेख गरेको छ ।
तौल घटाउन के खाने ?
तुलसीमा यस्तो गुण हुन्छ !
अपत्यारिला डिभोर्सका किस्साहरु !
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता डिभोर्सका घटनाहरु रहेका छन् जसले सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको थियो । डिभोर्स गर्नुको कारण पनि उत्तिकै रोचक र अनौठो खालका थिए । आउनुहोस् ती डिभोर्स केशबारे चर्चा गरौँ ।
कार्यालय सहयोगीको लागि ९३ हजारले दिए आवेदन, तीमध्ये ३७०० जना पिएचडी उत्तिर्ण
सबैभन्दा ठूलो फर्सी !
इमान्दार हाबर्ड !